Izinxushunxushu ezikhumulweni zezindiza: Izindiza ezingama-4,500 XNUMX zikhanseliwe emhlabeni jikelele manje
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Izinxushunxushu ezikhumulweni zezindiza: Izindiza ezingama-4,500 XNUMX zikhanseliwe emhlabeni jikelele manje
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Health News • Izindaba • Abantu • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Iningi lokukhanselwa liqhamuke ezindizeni ezinhlanu, kanti iChina Eastern iphoqeleke ukuthi imise uhambo olungaphezu kuka-1,200 ngempelasonto, kanti i-Air China, i-United, iDelta, iJet Blue, neLion Air nayo ibike inqwaba yezindiza ezikhanseliwe.
Ikubeka icala ngokushoda kwabasebenzi okubangelwe ukusabalala kombani kwe-COVID-19 Omicron strain, izindiza zomhlaba wonke zikhansele izindiza ezingaphezu kuka-4,500 XNUMX zasekhaya nezamazwe ngamazwe emhlabeni jikelele ngempelasonto ephakeme kaKhisimusi.
Izikhumulo zezindiza zase-US zibalele ngaphezu kwekota yakho konke ukukhanselwa kwezindiza, kanti i-United Airlines kanye ne-Delta Air Lines ziphakathi kwezigameko ezimbi kakhulu.
Ngokwemininingwane yakamuva yomhlaba wonke, kubizwe izindiza eziyi-2,380 kwathi ezinye eziyi-11,163 zabambezeleka emhlabeni jikelele ngosuku olwandulela uKhisimusi. Kube nokukhanselwa okungu-2,388 kanye nokubambezeleka okungu-2,579 kusukela ngoSuku lukaKhisimusi ntambama. Ezinye izindiza ezingama-747 ebezihlelelwe iSonto nazo zikhanseliwe.
Iningi lokukhanselwa liqhamuke ezindizeni ezinhlanu, kwathi iChina Eastern yaphoqeleka ukuthi imise uhambo olungaphezu kuka-1,200 ngempelasonto. Ngaleso sikhathi, i-Air China, Lufthansa, Delta Air Lines, Jet Blue, kanye ne-Lion Air babike izinombolo ezinkulu zezindiza ezikhanseliwe.
Bekunezindiza ezingama-688 ezikhanseliwe kulo lonke elase-US ngoLwesihlanu, kanti ezinye ezingama-980 zikhanseliwe kuze kube manje ngempelasonto ehamba phambili yokuhamba.
Inkampani yezindiza yaseJalimane iLufthansa ithe ngoLwesihlanu ihoxisa izindiza eziyi-12 ezinqamula i-Atlantiki ngesikhathi samaholide ngenxa “yokwanda okukhulu” kwabashayeli bezindiza abashayela abagulayo, naphezu kokuhlela "isivikelo esikhulu" sabasebenzi abengeziwe ngalesi sikhathi.
Izinxushunxushu zokuhamba ngomzuzu wokugcina zengeze ekukhungathekeni kwabagibeli abafuna ukugubha nemindeni yabo ngamaholidi ngemuva kokuthi izinyathelo zokuphepha zobhubhane zibe nomthelela omkhulu kuKhisimusi ngo-2020.
Ngokwezibalo ezikhishwe yi-American Automobile Association ekuqaleni kwale nyanga, izindiza bekulindeleke ukuthi zibone ukwanda kwezimoto ngo-184% phakathi kukaDisemba 23 noJanuwari 2 kusukela ngo-2020. I-US Transportation Security Administration kulindeleke ukuthi ihlole abantu abacela ezigidini ezingu-30 phakathi kukaDisemba 20 noJanuwari 3.